Chikafu & Sauce Kuzadza Machine - Micvd.com
NPACK inogadzira yakakwana sosi yekuzadza hutsanana sisitimu yekusangana nezvinodiwa zveavo vari kushanda nezvikafu uye sosi. Michina yedu yekuzadza inowanikwa mune dzese zvichenesesa zvine kukurumidza kudzimisa mavharuvhu, tri-clamp fittings, uye hutsanana tubing. Pombi dzehutsanana dziripo kune zvinoshandiswa uchishandisa viscous zvigadzirwa. Midziyo pamidziyo yedu yehutsanana inoratidzira kurongedza zviputi nekukurumidza kuitira kuti michina yemabhotoro igone kunyatsocheneswa. Yakachena-munzvimbo-nzvimbo masystem anogona zvakare kuverengerwa kubatsira unoshanda muchenesa iyo inline filler. Zvese NPACK michina yekuzadza yakagadzirirwa kuisirwa nyore, shanduko yakapusa, yakaderera nguva yekuchengetedza & kuchenesa, uye kugona kwakanyanya.
Isu tinonzwisisa kukosha kwekutarisa hutsanana, uye kusimba kana uchishanda nezvikafu uye sosi. Rega vatambi vedu vane ruzivo nezvikwata zveinjiniya vashande newe kugadzira mhinduro inokodzera chikafu chako chemafuta uye mushini wetsiva dzemuchina.
Hutsanana Chikafu Uye Sauce Packaging Machine Zvimiro & Bhenefiti
Stainless simbi uye anodized aluminium kuvaka kuvaka inochengetedza michina iyi kwehupenyu hwakareba.
NPACK'Chikafu uye mchero wekurongedza muchina unoshandisa kukurumidza kuputsa kuvaka mukati kusanganisira nekurongedzwa firipi, nhatu-kubatana, uye nekukurumidza kupatsanura mavharuvhu uye mapombi kuwedzera basa rekuchenesa Kuchenesa-munzvimbo-nzvimbo masystem zvakare aripo.
Kuenderana uye kuve nyore zvinhu zvakakosha zvezvinhu zvega zvega zvemukati zvemafirita kuitira kuti zvigadzirwa zvakawanda nemidziyo zviitwe pane imwe sisitimu ine mashoma kana asina kuchinja zvikamu.
NPACK's inline mchero wekurongedza muchina uri nyore kushandisa nekumisikidza. Nguva dzekuzadza dzinogona kuchengetwa se "nzira dzekubikira" yekukurumidza kuisirwa kuti itapuse nguva yekukwira uye nekukwidziridza chibereko chemutsetse wekutakura.
Ichena Kuzadza Systems Zvikumbiro
Mvura-yakatetepa uye inopupuma mvura zvikafu uye masosi
Pakati uye yakakwirira inogara ichionekwa mvura zvimedu uye sosi
Liquid yezvigadzirwa zvekudya zvine fodya
Sauce Kuzadza Machine
NP-VF otomatiki yekuzadza sosi yekushongedza inonyatsogadzirwa yekuzadza viscous svutugadzike mumirazi yegirazi nemabhodhoro emhuka, iyo zvakare iri mchero filler, mchero jar kurongedza muchina.
Mhando dzakasiyana dze NPACK otomatiki mchero wekuzadza mushini
Kune akawanda mhando uye mhando dzeasosi yekuzadza mushini pachigadziko pane akasiyana huwandu, iyo yekuzadza nozzles nhamba iri kubva mumusoro mumwe kusvika pamisoro gumi nematanhatu, uye huwandu hwekuzadza huri kubva ku16g kusvika ku5g, uye 20g kusvika 100g uye kunyange 1000g kusvika ku1000KG.
20L kusvika 200L Pamusoro hopper yesarudzo, yakapetwa Jacket hopper nekudziya uye kusanganisa system yesarudzo,
Main body yemushini yakagadzirwa ne304SS
Kuzadza mazizi, kuzadza mazizi kwakasarudzika dhizaini kuvharwa
Kuzadza mazizi kusimuka kumusoro uye pasi nemhepo cylinder, uye servo mota inofamba ichikwira nekudzika sarudzo
PLC kutonga system, uye HMI mashandiro
Kunyanya yakagadzirwa bhiza uye vharuvhu yeasosi, ine CIP system yekubatanidza bhiza.
Kuza Nozzles 1-16 Mabhomba
Kukwanisa Kuita 800 -5000Bottles Per Awa
Kuzadza Bhuku 100-500ml, 100ml tp 1000ml
simba 2000W, 220VAC
kunyatsoita ± 0.1%
Inotungamirwa Panasonic Servo Motor
Musoro Schneider Bata Screen
PLC kutonga, kushanda pane kubata skrini.
Panasonic servo mota inotyairwa, otomatiki gadzirisa iyo Kuzadza size paHMI, eg. Vashandisi vanoda Kuzadza 500g sosi, vashandisi vanongoisa nhamba mazana mashanu, ipapo muchina uchaita otomatiki kugadzirisa
Iyo volumetric ne piston, yakakwirira yekuzadza kurongeka
Nepamusoro Jekete mbiri yekudziya uye kusanganisa matangi ayo anozodzivirira iyo salstallization mushure mekurega kushanda rimwe zuva kana mamwe mazuva
Iyo otomatiki mchero wekuzadza mushini inogonerawo basa neCIP system iyo inobatanidza vashandisi CIP system
Iro bhiza remuchero wedhiza rakagadzirwa zvakanyanya maererano nemhando yemuchero, hapana chakafa kona, giredhi rekudya
Iwo akapfava machubhu kana mapaipi pane iyo mchero filler anogadzirisa nyika brand Toyox kubva japan
Kunyanya kugadzirwa rotary vhezheni yeku viscous uchi kuendesa
Honey Kuzadza Mushonga
Iyo NP-VF-1 otomatiki servo mota inotyairwa piston kuzadza muchina yakagadzirirwa uye yakagadzirwa chigadzirwa paNP-VF, Iyo inonyanya kunyorera kuzadza viscous fluid, senge zvigadzirwa zvezimwenje, zvigadzirwa zvemakemikari zvezuva nezuva, uye zvakare nezvezvigadzirwa zvezvikafu, muchina wokuzadza uchi, muchina wokuzadza sosi.
NP-VF-1 Automatic uchi mvura yekuzadza muchina
Kuvakwa kwemuviri wemuchina: Wakazadza muchina unogadzirwa neSUS304, zvishandiso zvakabatwa zvikamu zveSS 316L, Kuyera kusvika kune GMP zviyero
Sarudza PLC yekudzora system, yekubata screen sevhisi inogona kuchengetedza akawanda-mapoka e data;
Bvisa kusimudza kuzadza, simbisa kuti hapana bobble;
Kuzadza mazizi ne anti-inodonha basa;
Easy kushandisa, hapana bhodhoro hapana kuzadza, auto kutaridzika kuongorora;
Inogona kushongedza ne auto kugadzirwa mutsetse: Bhodhoro kurongedza, kuzadza, cap kudya, kutapa, kusunga, kuisa nyora, kunyora, kurongedza uye nezvimwe.
PLC inodzorwa ne: SIMens (kubva kuGerman) kana MITSUBISHI (kubva kuJapan);
Sezvo jamu / mchero iri yakakosha midziyo, iyo tangi yekuchengetedza yakarongedzwa zvakagadzirwa pamwe neredhi uye inodziya, inovimbisa kupisa kwekuzadza kwejam / mchero nguva dzose, michina inomhanya pamamiriro akasimba uye kunyatsozadza kwakanyatsojeka.
Iyo fekitori otomatiki jam yekuzadza muchina yaive dhizaini uye inogadzirwa neShanghai Npack Automation michina co., Ltd, especial yemvura kubva kune yakatetepa viscous kusvika pakakwirira mvura, senge mvura, mafuta, mafuta, kirimu, Jam, muto, huchi, ketchup zvichingodaro. Inonyanya kushandiswa muindasitiri yemakemikari, chikafu uye mishonga.
Uyu mutsara wepistoni yekuzadza muchina unoshaya kugadzirwa nekambani yedu. Adopts PLC uye inobata skrini yekudzora mabheji ane hushamwari hwevanhu-muchina, ine zviyero zvekuyera, chimiro chemberi, kumhanya kwakatendeka, uye musoro wega wega unozadza unogona kugadziriswa Mumwe nemumwe. Nhengo dzese dzinobata zvinhu zvinozadza dzakagadzirwa neyakagadzirwa simbi isina chimbi304, kutaridzika kwakanaka kwemushini, zvakare kunosangana GMP yakajairwa.
Muchina unoshandisa piston pombi inotenderera valve chimiro kuzadza, yakakodzera mhando dzese dzekunamatira mchero, kukwirira kwakanyanya; Chimiro chepombi chinotora chipfupi chinogumbura nhengo, chinogona kushambidzika, kusanganisa.
Iyo piston mhete yevolumetric jekiseni pombi inoshandisa zvakasiyana zvinyorwa zve silicone, polyflon kana dzimwe mhando zvichienderana nehunhu hwehusavi.
PLC control system, frequency shanduko yekugadzirisa inomhanya, yakakwira otomatiki.
Muchina unomira kuzadza pasina bhodhoro, verenga huwandu hwebhodhoro zvoga.
Kuzadza huwandu hwepombi dzese kunogadziriswa mune bundu, pombi imwe neimwe inogadziriswa. Shanda zviri nyore uye nekukurumidza.
Kuzadza musoro unogamuchira rotary piston pombi nebasa re anti-dhiza uye anti-kudonha.
Muchina wese wakakodzera mabhodhoro akakwana saizi, iri nyore kugadzirisa, uye inogona kupedzwa munguva pfupi.
Muchina wese unosangana nezvinodiwa zveGMP
2-12 mazai, kana kuti akashandurwa
Yakashandiswa bhodhoro renji:
Kubvumirana kwekuzadza huwandu (chokwadi):
800-4200 mabhodhoro / awa 30b / min pa4 yekuzadza magezi 1L
kubata screen, PLC kutonga
Kuzadza mazai kubva ku2 -16 mazai okusarudza
Anti- madonhwe, akachengetedzwa nevharidziro kumagetsi okuzadza
Pakuzadza, mazai ekuzadza achaisa mukati mebhodhoro
Kuzadza vhoriyamu kunogona kungoita nekugadziriswa ne touch screen, parizvino mutengi zvakare anogona kusarudza chinja nekutenderera kuti ubate hupfumi.
Frequency speed control, uye hapana bhodhoro pasina kuzadza
Yepamusoro mvura hopper application, uye otomat kunyevera pamusoro kushomeka kwemvura, uye otomatiki